Now it is confirmed about the Eh Kho Abbot’s accusation of U Thein Sein of committing crimes | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« This mad lapdog must be controlled by the Myanmar Islamic Council
မြန်မာမွတ်စလင် ဒုက္ခသည် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ခန်းခြောက်ကုန်ပြီ »
Now it is confirmed about the Eh Kho Abbot’s accusation of U Thein Sein of committing crimes
အပြောတွေပဲ ဖြစ်နေသလား၊ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ မိန့်ခွန်း ပြောကြားချက်များအား လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း (EMG) 01 December 2013
အဲခိုး (တောင်ကလေး ဆရာတော်)၏ “ပြည်သူကို ဒုက္ခပေးသူများ” ဆောင်းပါးတွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ နိုင်ငံတော် သမ္မတကို စွပ်စွဲပြစ်တင်ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အမတ်မင်းများတွင် တာဝန်ရှိကြောင်း ရေးသားခဲ့သည်။
နိုင်ငံရေး ပဋိပက္ခများ ဖန်တီးသည်။ လူမှုရေး ပဋိပက္ခများ အသွင်ဆောင်နေအောင် လက်သိပ်ထိုး ကစားသည်။ နိုင်ငံရေး ကစားကွက်၊ ပြောင်းကွက်၊ ချဲ့ကွက်များကို လုပ်သက်ကျေသူတို့နှင့် ပေါင်းပြီး အဘက်ဘက်မှ ပေါ်လာသော ဟာကွက်မြှုပ်ကွက်များကို မက်ကွက်များပေးပြီး လုပ်စေသည်။ အသက်များစွာ သေကျေသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးအခင်းကြောင့် သမ္မတကို အရေးယူရန် ထိုက်သည်။ ဤကိစ္စတွင် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင် တာဝန်ရှိသည်” ဟု ဆောင်းပါးရှင် အဲခိုးက ရေးသားခဲ့သည်။
(၁) ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးအခင်း (၂) မိထ္ထီလာ အရေးအခင်း (၃) လက်ပံတောင်းတောင် အရေးအခင်း (၄) ကချင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စတို့တွင် ဥပဒေအရ ပေးအပ်သော တာဝန်ရှိသူ ဖြစ်သည်။ ထိုအရေးအခင်း ကာလများတွင် သေကျေပျက်စီး ကြရသည်ကြောင့် သမ္မတ ဖြစ်သူမှာ တိုက်ရိုက်တာဝန် ရှိသည်။
“အပြောချည်းဖြစ်ပြီး လက်တွေ့ဘာမှ ဖြစ်မလာတဲ့ အခါမှာ လူတွေက ယုံကြည်မှု လျော့သွားတာပေါ့။ အရင်ကတော့ မကြားဖူးတာ ကြားရတော့ စိတ်ဝင်စားတယ်။ အခုတော့ စိတ်မ၀င် စားတော့ဘူး” ဟု မိထ္ထီလာမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းထိန်က ပြောကြားသည်။
“သမ္မတရဲ့ အာဏာရပြီး အချိန်ကစပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ ပြောခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းတွေကို ပြန်ပြီးကြည့်လို့ရှိရင် အဲဒီ မိန့်ခွန်းတွေမှာ ပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အကောင်အထည် ဖော်နိုင်မှု အပိုင်းမှာ အတော်အားနည်းတာကို တွေ့ရပြီးတော့ မိန့်ခွန်းတွေဟာ ပြည်သူလူထု အနေနဲ့ နားထောင်လိုက်ရင်တော့ ကောင်းပြီးတော့ မိန့်ခွန်းတွေထဲမှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ တကယ်ခံစား ရယူပိုင်ခွင့် မရှိတဲ့ အနေအထားမှာ ရောက်နေတာကို တွေ့ရတယ်။ အဲဒီအခါကျတော့ ပြည်သူလူထုထဲမှာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲ ဆိုတော့ သမ္မတရဲ့ မိန့်ခွန်းတွေ အပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားမှုက တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်းလာတယ်” ဟု နိုင်ငံရေး လေ့လာသုံးသပ်မှုဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးများ ရေးသားနေသည့် ဒေါက်တာ ရန်မျိုးသိမ်းက ပြောကြားသည်။
ပြည်သူလူထု လိုလားတောင့်တနေသော အဓိက ဆန္ဒနှစ်ရပ်ဟူ၍ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစဉ်တစိုက် ပြောကြားနေသော “တိုင်းပြည်တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးနှင့် တိုင်းရင်းသား အားလုံး၏ လူမှုစီးပွားဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး” ဆိုသည့် ကိစ္စအားလုံး၏ လူမှုစီးပွားဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး” ဆိုသည့် ကိစ္စရပ် နှစ်ခုမှာလည်း လက်ရှိအချိန်အထိ ပီပြင်စွာ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း မရှိသေးကြောင်း ပြောဆိုမှုများ ရှိနေသည်။
“သမ္မတကြီးက ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခဏခဏ ပြောတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို အခုထိ ရအောင်မတည်ဆောက် နိုင်သေးဘူး။ သန့်ရှင်းတဲ့ အစိုးရ၊ ကောင်းမွန်တဲ့ အစိုးရ ဖြစ်ရမယ်လို့ ပြောတယ်၊ အခု အချိန်အထိ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနဲ့ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုတွေကို ထိထိရောက်ရောက် မတိုက်ထုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ မြင်တယ်။ သမ္မတကြီးက အခြားလူတွေထက် စကားအများကြီး ပိုပြောနေပေမဲ့ လက်တွေတော့ မလုပ်ပြသေးဘူး လက်တွေ့လုပ်ဖို့ ပိုအရေးကြီး ပါတယ်” ဟု စာရေးဆရာ ထက်မြက်က ပြောကြားသည်။
စာရေးဆရာ ထက်မြက်သည် ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်ထုတ် စောင့်ကြည့်သတင်းဂျာနယ် အတွဲ (၈)၊ အမှတ် (၂၆) တွင် “ဦးသိန်းစိန် အပြောနည်းနည်းလျှော့” ဟူသော ဆောင်းပါးကို ရေးသားခဲ့ပြီး သမ္မတ၏ မိန့်ခွန်းများနှင့် ပြည်သူလူထု၏ အခြေခံ လိုအပ်ချက် ကွာဟနေမှုများကို ဝေဖန်ရေးသားခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
“ဦးသိန်းစိန် တက်လာပြီး ကတည်းက ပြောလိုက်တဲ့ မိန့်ခွန်းတွေ၊ ဘာတစ်ခုမှ အကောင်အထည် ပေါ်မလာဘူး။ တကယ်ပြောရရင်တော့ အမေရိကန် စတိုင်မျိုး လုပ်တာပေါ့။ အဓိကကတော့ ဗိုလ်သိန်းစိန်က တကယ်လုပ်ရမယ့် ကိစ္စတွေကို မလုပ်နိုင်ဘူး။ လူထုကျေနပ်ဖို့ပဲ ပြောနေတာပဲ။ ကလေးတွေကို ချော့သလို ပုံစံမျိုးပဲပေါ့” ဟု ၁၉၆၂ ခုနှစ် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဦးလှရွှေက ပြောကြားသည်။
“အစ်မတို့ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေက ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးလို့ ပြောနေကြတယ်။ ဒီမိုကရေစီကို နိုင်ငံရေး သမားတွေပဲ ရနေကြတယ်လို့ အောက်ခြေလူတန်းစားတွေက ယူဆနေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် တိုင်းပြည်မှာလည်း ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေ ပိုများလာတာပေါ့” ဟု စာရေးဆရာမ နှင်းပန်းအိမ်က ဆိုသည်။
“ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်က အဓိကကတော့ ဆင်းရဲတွင်းကနေ ရုန်းထွက်ဖို့၊ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ဖို့။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရ အနေနဲ့ကလည်း နှစ်တွေသာ ကြာလာတယ်။ သိသိသာသာ ပြောင်းလဲအောင်လည်း မလုပ်နိုင်သလို တကယ့်အောက်ခြေ လူတန်းစားတွေ အတွက်၊ လယ်သမားတွေ အတွက်၊ လယ်သမားတွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာ အထူးသဖြင့် ရာခိုင်နှုန်း ၇၀၊ ဆင်းရဲတဲ့ ပြည်သူက ရာခိုင်နှုန်း ၉၀ ရှိတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် သိသာမြင်သာတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ အပြောင်းအလဲတွေ ဘာမှဖြစ်မလာဘူး” ဟု ရခိုင်ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင်က ပြောကြားသည်။
“နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး စီးပွားရေး အကြံပေး အဖွဲ့တွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆင်းရဲမှု ပပျောက်ရေး စလုပ်မယ် ဆိုတုန်းကတော့ တော်တော်အားတက် သွားတယ်။ တကယ်ပဲ ဖြစ်တော့မှာလားပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အခုပြောပြီးတာ တစ်နှစ်ခွဲ နှစ်နှစ်လောက် ရှိနေပြီ။ ဆင်းရဲမှု ပပျောက်မှုဆိုတာ အရိပ်အယောင်တောင် မတွေ့သေးဘူး။ နောက်တစ်ခု ဖုန်းကတ်ဆိုရင် သူ့ခမျာ စေတနာနဲ့ လုပ်ရှာတာပဲ။ အောက်ကလူတွေက ပေါက်ကရ လျှောက်လုပ်တော့ ပြဿနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်ဆိုတာ အဲဒါအစစ်ပဲ။ အောက်ကလူတွေကို သူမနိုင်ဘူးဗျ။ အောက်ကလူတွေကလည်း စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ မလုပ်တတ်ကြဘူး” ဟု ဦးဝင်းထိန်က ပြောကြားသည်။
“ဆင်းရဲမွဲတေမှု တိုက်ဖျက်ဖို့ဆိုတာ ငွေချေးလိုက်ရုံနဲ့ ပြီးမသွားဘူး။ ရေရှည်လုပ်ငန်းတွေပါ ထောက်ပံ့ရမှာ။ အလုပ်အကိုင်တွေ ဆက်ရှိနေဖို့။ ဆင်းရဲတာ နှစ်မျိုးရှိတယ်။ အခွင့်အရေး ဆင်းရဲတာနဲ့ ဓနဥစ္စာ ဆင်းရဲတာ။ ပထမ အဆင့်မှာ အခွင့်အရေးကိုပဲ ချမ်းသာအောင် လုပ်ပေး။ အခုက ဆင်းရဲမှုကတောင် မလွတ်နိုင်သေးဘူး ဖြစ်နေတယ်” ဟု ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းမှ ဦးဂျင်မီက သုံးသပ်သည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ – သမ္မတရုံးဝက်ဘ်ဆိုက်)
“အခုချိန်မှာ တိုင်းပြည်ရဲ့ Real GDP က ခြောက်ရာခိုင်နှုန်းကျော် တက်တယ်ဆိုပေမဲ့ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းက ၇ ဒသမ ၃ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိနေတယ်။ ဒီအတိုင်း ဆက်သွားနေရင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ မျှော်မှန်းချက်က သိပ်မလွယ်ဘူး။ ၂၀၁၄ မှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ အပြောင်းအလဲကြီး ဖြစ်လာရင်တော့ မပြောနိုင်ဘူးပေါ့။ GDP ကို တွက်တဲ့အခါ ကိန်းဂဏန်းတွေကိုပဲ ကြည့်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အမှန်တကယ် ရရှိငွေ၊ သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေ ဘယ်လောက်ရှိနေသလဲ၊ ၀င်ငွေကွာဟမှု ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ဆိုတာကို ထည့်ပြီးကြည့်ရမယ်” ဟု ဒေါက်တာအောင်ကိုကိုက ဆိုသည်။
“လွှတ်တော်ဆိုတာက ဥပဒေပိုင်း၊ အစိုးရက အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း။ လွှတ်တော်က ပုဂ္ဂိုလ်အများစုကတော့ ကိုယ့်ဒေသ၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ အသံကို ယူပြီးမှ လွှတ်တော်ကို ပြောကြတာကိုး။ ဒါပေမဲ့ ဌာနဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးတွေ၊ ဒုဝန်ကြီးတွေ ဖြေတာပြုတာကျတော့ တချို့က သာမန်ကာ လျှံကာတွေ ဖြေတယ်။ လှီးလွှဲဖြေတာတွေ ပါတဲ့အခါကျတော့ တော်တော်လေး စိတ်ပျက်လာတယ်။ ဒါကိုလည်း တိုးတက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီး ကြံဆနေတာပေါ့လေ။ နောက်တစ်ချက်က ဌာနဆိုင်ရာတွေက လွှတ်တော်ကော်မတီကို လာတင်ပြတဲ့ အခါမှာ အချက်အလက်တွေ မမှန်ဘူးဗျ။ လိမ်တယ်လို့တော့ မစွပ်စွဲချင်ဘူး။ အချက်အလက်တွေ မမှန်ဘူး။ အဲဒီလို ကွာဟတာတွေ ရှိတယ်။ ဥပဒေပြုရေးနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးက ချိတ်ဆက်မှု တော်တော်အားနည်း ပါတယ်” ဟု ဦးဝင်းထိန်က ဆိုသည်။
နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာသံတော်ဆင့်ဂျာနယ် အတွဲ (၂)၊ အမှတ်(၃၄) တွင်မူ ဆောင်းပါးရှင် အဲခိုး (တောင်ကလေး ဆရာတော်)က “ပြည်သူကို ဒုက္ခပေးသူများ” ဟု ဆောင်းပါးရေးသားခဲ့ပြီး ထိုဆောင်းပါး၌ နိုင်ငံတော် သမ္မတကို စွပ်စွဲပြစ်တင်နိုင်သည့် အချက်များနှင့် သမ္မတကို နိုင်ငံတော် တရားရုံးတွင် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က တရားစွဲဆို သင့်သည်ဟူ၍ ရေးသားခဲ့သည်။
ထို့နောက် “နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားများသည် နိုင်ငံတော် သမ္မတများကို ဥပဒေဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် လစာ၊ စရိတ်နှင့် အဆောင်အယောင်များ ပေးထားသည်။ တာဝန်ပြီးဆုံး၍ အနားယူလျှင်လည်း ဥပဒေနှင့်အညီ အငြိမ်းစား လစာနှင့် သင့်တင့်လျှောက်ပတ်သော ထောက်ပံ့မှုများလည်း ရရှိကြဦးမည်။ ဤမျှသော ပြည်သူတို့၏ စေတနာကို တန်ဖိုးမထားဘဲ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်ကို အမျိုးမျိုး လှည့်ပတ်ဖြားယောင်းသည်။ နိုင်ငံရေး ပဋိပက္ခများ ဖန်တီးသည်။ လူမှုရေး ပဋိပက္ခများ အသွင်ဆောင်နေအောင် လက်သိပ်ထိုး ကစားသည်။ နိုင်ငံရေး ကစားကွက်၊ ပြောင်းကွက်၊ ချဲ့ကွက်များကို လုပ်သက်ကျေသူတို့နှင့် ပေါင်းပြီး အဘက်ဘက်မှ ပေါ်လာသော ဟာကွက်မြှုပ်ကွက်များကို မက်ကွက်များပေးပြီး လုပ်စေသည်။ အသက်များစွာ သေကျေသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးအခင်းကြောင့် သမ္မတကို အရေးယူရန် ထိုက်သည်။ ဤကိစ္စတွင် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်တွင် တာဝန်ရှိသည်” ဟု ဆောင်းပါးရှင် အဲခိုးက ရေးသားခဲ့သည်။
ဆောင်းပါး၏ နိဂုံးပိုင်းတွင်မူ “သမ္မတ ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်ကို ကိုယ်စားပြုသူ ဖြစ်သည်။ သမ္မတသည် အခြေ ခံဥပဒေနှင့် အခြားသော ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ခြင်း မရှိရ။ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၄ နှင့် ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူ ဖြစ်သည်။ မိမိ သမ္မတ ဖြစ်ပြီးမှ မိမိ၏ ပါတီနှင့် နေပြည်တော်တွင် ဆက်သွယ်မှု လုပ်သည်။ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်များတွင် အတိအလင်း ဖော်ပြထားသည်။ (၁) ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးအခင်း (၂) မိထ္ထီလာ အရေးအခင်း (၃) လက်ပံတောင်းတောင် အရေးအခင်း (၄) ကချင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စတို့တွင် ဥပဒေအရ ပေးအပ်သော တာဝန်ရှိသူ ဖြစ်သည်။ ထိုအရေးအခင်း ကာလများတွင် သေကျေပျက်စီး ကြရသည်ကြောင့် သမ္မတ ဖြစ်သူမှာ တိုက်ရိုက်တာဝန် ရှိသည်။ ဤသို့ အကြွင်းမရှိ တာဝန်ရှိနေသူ ဖြစ်နေပါလျက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အမတ်မင်းများ သမ္မတကို အရေးယူ ပြစ်တင်စွပ်စွဲမှု မပြုလုပ်ခြင်းသည် အလိုတူ အလိုပါ ကြသူများဟု ထင်ရှားသည်။ ဤသို့သော သမ္မတ၊ ဤသို့သော လူထုကို ကိုယ်စားပြုသော အမတ်မင်းမျိုး၊ ဤသို့သော အခြေခံ ဥပဒေမျိုး ပြည်သူများ ဒုက္ခမဖြစ်ဘဲ ရှိနိုင်ပါ့မလား မောင်တို့ရဲ့” ဟု ရေးသားခဲ့သည်။
“တကယ်တော့ ဦးသိန်းစိန်ဟာ The Listener-In-Chief မဟုတ်ပါဘူး။ The Speaker-In-Chief လို့ပဲ ကျွန်တော်က မြင်ပါတယ်” ဟု ဒေါက်တာရန်မျိုးသိမ်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့ အစိုးရဟာ ပြည်သူတွေ ဖြစ်နေတာတွေ၊ ပြည်သူတွေ ဖြစ်ချင်တာတွေကို ကျွန်တော်တို့ သိပါတယ်။ အပြည့်အ၀ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက် နိုင်အောင်လည်း ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်” ဟု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က မဲဆန္ဒနယ် အများစုတွင် အနိုင်ရခဲ့ပြီးနောက် မေ ၁၂ ရက်က ပြုလုပ်သော “နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး” တွင် ပြောကြားသော သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ လမ်းညွှန်ချက်တွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မဟာဗျူဟာများကို အသေးစိတ် ထုတ်ဖော်ပြောဆို ခဲ့သည့်နည်းတူ အစိုးရ၏ အားနည်းချက်ကို ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်က သက်သေပြသည့် အချက်ကိုလည်း ၀န်ခံပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပြည်သူတစ်ဦးချင်းစီ ထိတွေ့ခံစားနေရသည့် နေ့စဉ်တွေ့ကြုံနေရသော စားဝတ်နေရေး၊ သွားလာနေထိုင်ရေး၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပြောင်းလဲတိုးတက်အောင် အစီအမံများ ပြုလုပ်ရန် အရေးတကြီး လိုလာကြောင်း၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မဟာဗျူဟာ ပထမအဆင့် (First Stage of Reform Strategy for National Development) ကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ဆောင်ရွက်ခဲပြီး ဖြစ်သည့်အတွက် ဗဟာဗျုဟာ ဒုတိယအဆင့် (Second Stage of Reform Strategy for National Development) ကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်သူလူထု ဗဟိုပြု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး (People Centered Development)၊ လူမှုရေး စီးပွားရေး အသင်းအဖွဲ့များ ပါဝင်သော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ (Civil Society) ၏ အရေးပါမှုနှင့်အတူ မြို့နယ်တိုင်းတွင် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အသင်းအဖွဲ့များ၊ ကျေးလက် သမ၀ါယမ အစုအဖွဲ့များ၊ မြို့နယ် သမ၀ါယမ အသင်းများ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်ရေး၊ နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာငွေ ဘတ်ဂျက်တိုးမြှင့် သုံးစွဲရေး၊ အခွန်အကောက် တိုးတက်ရရှိရေး၊ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ (Public Finance) အား ထိရောက်သောနည်းဖြင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကုမ္ပဏီများ အများပိုင် ကုမ္ပဏီများ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ငွေကြေးဈေးကွက် ဖြစ်ပေါ်လာရေး၊ ဘဏ်များ၊ ငွေစုငွေချေး လုပ်ငန်းများ၊ သမ၀ါယမ အစုအဖွဲ့များ စုပေါင်းရင်းနှီး မြုပ်နှံလုပ်ကိုင်မှု တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်း အစရှိသည်တို့ အပါအ၀င် မြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအမံများ၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှု လျော့ချရေး လုပ်ငန်းတွင် ကျေးရွာအစုအဖွဲ့များ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းရေး စသည့်အချက်များကိုလည်း ထည့်သွင်းပြောကြား ခဲ့သည်။
Tags: Aung San Suu Kyi, Buddhism, Burma, Naypyidaw, Rakhine State, Thein Sein, War crimes, Warfare and Conflict
This entry was posted on December 24, 2013 at 10:14 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.